B5B ब्लगिंग को2कुञ्जी | Martech Zone
शनिबार, जनवरी 2, 2010 शनिबार, अक्टोबर 25, 2014 Douglas Karr
यो हप्ता म वेबट्रेन्ड इंगेज सम्मेलनको लागि एउटा प्रस्तुतीकरणमा काम गर्दैछु। मेरो शीर्षक एकदम विशिष्ट छ र समय स्लट एकदम छोटो छ (१० मिनेट), त्यसैले यो मलाई चुनौतीको छ प्रस्तुतीकरणको एक हेक गर्न! मलाई सफल B10B ब्लगिंगमा बोल्न भनियो।
मैले प्रस्तुतीकरणको लागि distin अलग रणनीतिहरू तल व्यवसाय ब्लगि Blogमा कुञ्जीहरू साँघुरो गरें।
अगाडि हुनुहोस्। यो ब्लग गर्न पर्याप्त छैन, तपाईं अन्य सबै प्रतियोगीहरूको अगाडि हुनुपर्दछ र त्यहाँ बाहिर अन्य आवाज। तपाईं हुनु पर्छ ग्राहकहरूको अगाडि, सान्दर्भिक सामाजिक नेटवर्कको अगाडि, प्रतियोगिहरूको खोजी ईन्जिन नतीजाहरूको अगाडि। अब उप्रान्त तपाईले पर्खनु पर्दैन मान्छे तपाईलाई भेट्न।
एक मार्ग प्रदान गर्नुहोस्। तपाईंको ब्लग को प्रत्येक पृष्ठ को लागी प्रभावी रूप मा एक एक अवतरण पृष्ठ हो। तपाईंले आगंतुकहरूलाई तपाइँसँग सम्पर्क गर्नको लागि तरिकाहरू आपूर्ति गर्नुपर्दछ, उनीहरूले तपाईंलाई सम्पर्क गर्नका लागि कारणहरू आपूर्ति गर्नुपर्दछ, र तपाईंले यसलाई सरल र सजिलो बनाउनुपर्दछ।
इन्द्रियहरूलाई खुवाउनुहोस्। व्यक्तिहरू ब्लग पोष्टहरू पढ्दैनन्, उनीहरू स्क्यान गर्छन्। केहि पढ्न को लागी, तिनीहरू दृश्य र श्रवण माध्यम को लागी हेर्नुहोस्। यदि तपाईं प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भने सेतो अन्तरिक्ष प्रभावकारिता, गर्दै ध्वनि र भिडियो, तपाइँ तपाइँको सम्भावित श्रोताको एक ठूलो प्रतिशत संग कनेक्ट हुनुहुन्न।
जानकारी क्याप्चर गर्नुहोस्। सम्भावना र ग्राहकहरु संग जानकारी प्रदान गर्न र अधिकार निर्माण गर्न ब्लग एक शानदार तरीका हो। तपाईंले यसलाई नि: शुल्कका लागि गर्नुपर्दैन ... यो सर्वेक्षण र तपाईंको पाठकको बारेमा जानकारी अनुरोध गर्न ठीक छ। ह्वाइटपेपर वा वेबिनारहरू जस्ता थप संसाधनहरू प्रदान गर्दै दर्ता आवश्यक छ.
डलर मा मापन गर्नुहोस्. मंगनी टिप्पणी मा मापन गरिएको छैन, यो हो डलर र सेंट मा मापन गरियो। यो व्यापार एकीकृत गर्न आवश्यक छ विश्लेषण उपकरण जुन तपाईंको ब्लगिंग प्रयासहरूको सटीक मापन समायोजन गर्न सक्दछ।
प्रत्येक कुञ्जी, पाठ्यक्रम, एक सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण हुन सक्छ ... तर यदि तपाईं अन्य व्यवसायहरूसँग व्यवसायको लागि ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ भने ठूलो चित्रको दृष्टि नहटाउनुहोस्।
टैग: b2bb2b ब्लगिंगb2b सामग्रीक्षमताफेसबुकवेबट्रेंडहरू
जनवरी १, २०१3१२::2010 अपराह्न
राम्रो सल्लाह। म धेरै वर्षदेखि ब्लगिging गर्दैछु, तर पछिल्लो months महिनामा मेरो व्यवसायमा परिवर्तन देखिएको छ किनकि ब्लग बढी केन्द्रित भएको छ, र मेरो बाँकी वेबसाइटसँग जोडिएको छ।